Injabulo ibhalwe emehlweni yabahlali abathole izindlu zangasese ezintsha sha | Scrolla Izindaba
Injabulo ibhalwe emehlweni yabahlali abathole izindlu zangasese ezintsha sha
Sekuyiminyaka engaphezu kwengama-20 behlala nezindlu zangasese zamabhakade ezinuka kabi ngaphandle kweminyango yabo, kodwa izindlu zangasese ezintsha sha ezinikezwe abahlali base-Alexandra zikuqedile ukuhlupheka kwemindeni ecishe ibe ngama-200 ebisebenzisa uhlelo lwamabhakede.
UNikelwa Pongco uthe, ekugcineni abantu bakuleyo ndawo bazothola ukuphumula.
“Indawo ibiyimbi ukwedlula ukuba sejele. Besiphoqeleka ukuthi sihlale endaweni enephunga elibi ngoba yiyo kuphela le ndawo esingayibiza ngokuthi yikhaya,” kusho yena.
Uthe, amabhakede ayehlanzwa kanye ngesonto.
“Isonto lonke sasiphoqeleka ukusebenzisa izindlu zangasese ezingcolile. Bekuyisipiliyoni esingenabuntu esedlula zonke engake ngahlangabezana nazo,” kusho uNikelwa.
Leza zindlu zangasese zaziyisikhumbuzo esibi sokuthi ubumpofu babubukeka kanjani.”
UNikelwa obechichima injabulo kanye nomakhelwane bakhe bebekikiza, behalalisa futhi bememezela phezulu ngesikhathi izikhulu zisika iribhoni zibanika izindlu zangasese ezintsha nsha ezigeleza amanzi.
“Ngibona sengathi sengithuthile. Ngizizwa sengathi ngihlala e-Sandton!” esho.
“Ekugcineni sesinezindlu zangasese esikwazi ukuzisebenzisa ngaphandle kokuzibuza ukuthi umuntu obeke wangena phambilini wenzeni. Sengikwazi nokuxoxa ku-WhatsApp uma ngisendlini encane.”
UNonkululo Pyomsa uthe, bebeqale bevale iminyango namawindi uma befuna ukudla.
“Isimo besisibi kakhulu ngesikhathi kuqala umvalelo njengoba bekufanele sihlale ekhaya ngaso sonke isikhathi sibhekene nephunga elibi,” esho.
Ukutholakala kwezindlu zangasese ezintsha nsha kwenziwa ukuba kusungulwe i-Strong Voices of Alex, ngesikhathi somvalelo wezinga lesihlanu ukusiza amaphoyisa ukuthi aqinise imithethonqubo yomvalelo futhi bathola nezimo ezinzima abantu abahlala ngaphansi kwazo.
Usihlalo weqembu u-Adolf Marema uthe, kuyadabukisa ukuthi kunabantu uhulumeni “abakhohliwe” abangamakhilomitha ambalwa ukusuka e-Sandton.
Uthe, amalungu e-Strong Voices of Alex angama-30 abambisane nabaxhasi abanjengo-Turn2Love kanye no-Rebosis.
“Lezi zindlu zangasese zizobuyisa isithunzi sabantu,” esho.
“Ukubambisana kwethu kwenze le mpumelelo yaba khona.”